Politika kitapo vaovao any Vietnam Airlines: Saino ny lanjanao!
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Politika kitapo vaovao any Vietnam Airlines: Saino ny lanjanao!
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao Mafana Vietnam
nataon'i Mario Masciullo, natokana ho an'ny eTN
i Vietnam Airlines nanolotra politika vaovao momba ny entana nanomboka ny 1 Aogositra nitokanana ny “Politika momba ny hevitra momba ny sombin-javatra” amin'ireo sidina rehetra ampiasain'ny mpitatitra eo anelanelan'i Eropa sy i Vietnam.
Ny fepetra vaovao dia manolo ny lalàna teo aloha mifototra amin'ny lanjan'ny kilao. Ny fitsipika vaovao dia mamela: ao amin'ny Business Class roa fonosana ao an-trano (ho an'ny totalin'ny 18 kg, miaraka amin'ny lanjany lehibe indrindra 10 kg ho an'ny entana mavesatra indrindra) ary fonosana 2 ao amin'ny fihazonana (ho an'ny 32 kg); amin'ny Premium Economy, fonosana 2 ao anaty tranony (ho an'ny totalin'ny 18 kg, miaraka amin'ny lanjan'ny 10 kg indrindra ho an'ny entana mavesatra indrindra) ary fonosana 2 ao amin'ny fitazonana (ho an'ny 23 kg); amin'ny Toekarena, fonosana iray ao anaty tranony (mitontaly 12 kg, mizara roa ny enta-mavesatra mavesatra 10 kg sy kojakoja 2 kg) ary ny fonosana ao am-pelatanany (23 kg total).
Mba hiantohana ny fifandimbiasan'ity politika vaovao momba ny entana ity, ny mpandeha rehetra manana ny tapakila Economy navoaka sy miresaka vanim-potoana fitsangatsanganana eo anelanelan'ny 1 Aogositra sy 31 Desambra 2019, dia afaka miditra maimaimpoana ao anaty fonosana fanampiny 1 (max 23 kg).